Dowladda Ingiriiska oo muwadiniinteeda uga digtay deegaanka Maamulka la magacbaxay Somaliland. | Sahan radio
Dowladda Ingiriiska oo muwadiniinteeda uga digtay deegaanka Maamulka la magacbaxay Somaliland.
Xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ka digaya khatar reer galbeedka kaga soo fool leh Somaliland,iyadoo si gaar ah loogu digay dadka Britain u dhashay ee joogaa deegaanadda Maamulka la magac baxay Somaliland.
Warbixintaan oo laga baahiyey idaacadda BBC-da ayaa lagu shaaciyey in Xafiiska arrimaha dibadda Britain uu si adag uga digayo waxyeeladda uga timada Somaliland dadka u dhashay wadamada reer galbeedka eek u sugan isla maraakana uu ugu sheegayo in ay ka baxaan deegaankaas.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ay jiraan khataro laga filan karo in ay halkaas ka dhacaan kuwaas oo ay ka midyihiin in shakhsiyaadkaas loo gaysto afduub iyadoo lagu doonayo madaxfurasho iyo wixii la mid ah waa sida loo dhigay warbixintee.
Dowladda ingiriisku waxaa ay ka midtahay dalalka sida weyn u tageera deegaanka Somaliland ,iyadoo uu ka caawinayey mashaariic badan oo lagu horumarinayo barnaamijyada ay ka midka yihiin Nabadgelyadda ,Nidaamka axsaabta badan iyo horumarinta barnaamijyada arrimaha bulshada.
Digniintaan oo ah mid aan la dhayalsan Karin ayaa sababi karta in ay shaqaalaha iyo ajaanibta ku sugan Somaliland ay si degdeg ah uga baxaan deegaankaasi,taasi oo dhawac weyn ku ah Maamulka la magacbaxay Somaliland.
Ma jiro wax war ah ku adan arrintaan ee ay jeediyeen masuuliyiinta Maamulaasi ,balse waxaa la filayaa in ay ka hadlan arrintaan oo isbadal ku samaysay riyadii maamulkaasi ee ahayd Gooni isu taaga ee uu dhabarka ka riixayey Ingiriisku.
Warbixintaan ayaa waxaa ay kusoo adaysaa xilli lagu wado in dalka ingiriiska dhawaan uu ka dhaco shir balaran oo laga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyadoo lagu soo qaadidoono arrimaha Maamulka la magacbaxay Somaliland ,madaama la yagleelay dowlad dhexe oo faderali ah oo ay yeelatay soomaaliya.